ဖုန်းရွှေ လာပြီ, Feng shuiကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဗေဒင်ပညာ နှင့် အတွေးအမြင်
# အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း (၁) »
# ဖုန်းရွှေ လာပြီPublished September 27, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ဒီလို နေရာချထားမှု မှန်ကန်ရင် ဒီ နေအိမ် ၊ အဆောက်အဦမှာ နေထိုင်တဲ့ သူများအတွက် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး များတိုးတက်ကောင်းမွန် ပြီး အိမ်တွင်း အေးချမ်းသာယာမှုကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ (တရုတ်လူမျိုးများဟာ) ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ “လေကြော” နဲနဲ ရှည်ချင် ပါသေးတယ်။ တရုတ်လူမျိုးများဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းတဲ့ လူမျိုးလို့ ပြောရမလား ? ချီးမွမ်းစရာ ကောင်းတဲ့ လူမျိုး လို့ ပြောရမလား မသိပါ ? ။ တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ “လူ့ယဉ်ကျေးမှု (Human Civilization)” အစောဆုံး လူမျိုးကြီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဟာ အနှစ် (၅၀၀၀)ကျော်လောက်ပြီလို့ ပညာရှင်တွေ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ ခေတ်လွန် ယဉ်ကျေးမှုတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု “ကျဆုံးပျောက်ကွယ်” သွားကြပေမယ့် သူတို့ ကတော့ ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေလည်း အများဆုံး/ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကိုလည်း ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း အရှိဆုံး လူမျိုးစုကြီး တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်လျှက် ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့တရုတ်လူမျိုးများဟု သူတို့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ အလွန်တိုးတက်လှတဲ့ သိပ္ပံ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးကို ရောက်လာပေမယ့် တရုပ်လူမျိုးများဟာ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာအမွေအနှစ်များကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထိန်းသိမ်းလျှက် ရှိနေဆဲ ဆိုတာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ မိဘဘိုးဘွားတွေကို ကန်တော့တဲ့ ပွဲ၊ လ,နတ် ပူဇော်ပွဲ၊ ကွမ်ရင်မယ်တော် ပူဇော်ပွဲ ၊ တစ္ဆေကြီး ပူဇော်ပွဲ ၊ ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ ၊ သင်္ချီုင်းနတ်ပူဇော်ပွဲ စတဲ့ စတဲ့ . . . မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ရိုးရာပွဲလမ်းတွေ ကို တရုတ်လူမျိုးများဟာ ယနေ့ထက်တိုင်အောင် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထိန်းသိမ်းထားကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
တရုပ်ရိုးရာ အကောင် (၁၂)ကောင် ဗေဒင် ၊ ဘုတ်ကြီး (၈)ပါးဗေဒင် (ယိချင်း) ၊ ဘုတ်ကြီး ငါးပါးဗေဒင် ၊ ဖုန်းရွှေ ၊ ကွမ်ရင်မယ်တော် စာချခြင်း စတဲ့ ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာများကိုလည်း ယနေ့တိုင် ယုံကြည်လိုက်နာလျှက် ရှိနေပါတယ်။
“ကွန်မြူနစ်ဝါဒ” ရဲ့ လက်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ပြီး (မော်စီတုန်းခေတ်) အလွန်ဆိုးဝါးလှတဲ့ “ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကာလ” ကြီးမှာ တရုပ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် များစွာဟာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို “အမှောင်ကာလကြီး” ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ တောင်မှ တရုပ်လူမျိုးများဟာ သူတို့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို (အသက်နဲ့ရင်းပြီး) ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ဆက်လက် ထိမ်းသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို ရှေးရိုးရာ အစဉ်အလာတွေကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ယုံကြည်နေကြတာကြောင့် သူတို့ကို “ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ ၊ ရှေးရိုးဝါဒီ” တွေလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါသလား ? ၊ “အယူသည်းသူ၊ ခေတ်နောက်ကျသူ” များအဖြစ် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသလား ? ။
ဒါဆိုရင် ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ တရုတ်နိုင်ငံ / တရုတ်လူမျိုးများရဲ့ တိုးတက်မှုကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ယနေ့ (၂၁)ရာစု တရုပ်လူမျိုးတို့ရဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ နည်းပညာပိုင်းမှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ တိုးတက် နေမှုကို ကြည့်ရင် သူတို့ကို ခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ လူမျိုးဟု ခေါ်နိုင်ပါဦးမလား။ တရုပ်လူမျိုး တို့ရဲ့ စီးပွားရေး ၊ နည်းပညာ တိုးတက်မှုကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက မျက်လုံး အပြူးသားနဲ့ စောင့်ကြည့် နေကြရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် သန်းပေါင်းများစွာသော တရုပ်လူမျိုးများဟာ ယနေ့ထက်ထိအောင် ဂမ္ဘီရပညာများ နှင့် ရှေးရိုးရာအစဉ်အလာ များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးဆဲသာ ရှိပါသေးတယ်။ တရုတ်ရိုးရာ ဘုံကျောင်းများ၊ ကွမ်ရင် မယ်တော် ကျောင်းများတွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တရုတ်လူမျိုးများ ပြည့်နှက်လျှက် ရှိပါသေးသည်။
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် တရုတ်သူဌေးကြီးများသည်လည်း တရုတ်ရိုးရာ ဂမ္ဘီရပညာရှင် များနှင့် တိုင်ပင်နှီးနှောလျှက် ရှိနေပါ သေးတယ်။ “ကွမ်ရင်မယ်တော်” ကျောင်းများ တွင်လည်း မိမိတို့၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် “စာချ” လျှက်ရှိသော တရုပ်လူမျိုးများ အများအပြားကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (၂၁)ရာစု အ၀င်ကာလမှာ စီးပွားရေး နှင့် နည်းပညာအရာမှာ ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၁) အဆင့်သို့ ရောက်လုနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့ လူမျိုးကြီး တစ်မျိုးဟာ မိမိတို့ရဲ့ အနာဂါတ်ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှုအတွက် “ဂမ္ဘီရပညာရပ်”များ အပေါ်တွင် လုံးဝ အားထားယုံကြည် လျှက်ရှိသည်မှာ ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ပင် မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လက်တွေ့ အောင်မြင်နေကြပါတယ်။
ဒါဟာ ဂမ္ဘီရ ပညာရပ်များကို ခေတ်နှင့် ဆီလျှော်မှု မရှိသော အယူသည်းမှုများအဖြစ် ရှုမြင်နေကြ သူများအတွက် စဉ်းစားဖွယ်ရာ ကိစ္စကြီး တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် လက်တွေ့လေ့လာ ကြည့်သလောက် တရုတ်လူမျိုး (၇၀)% လောက်ဟာ “ကွမ်ရင်” မယ်တော် ကျောင်းမှာ “စာချ” ခြင်း ကဲ့သို့သော ဂမ္ဘီရ ကိစ္စများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု မပြုလုပ်ဘဲ ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြုလုပ်လေ့မရှိကြပါဘူး။ “စာချ” လို့ ရတဲ့ အဖြေများကိုလည်း တသွေမတိမ်း လိုက်နာပြီး လုပ်ဆောင်လေ့ ရှိကြတာကို လေ့လာဘူးပါတယ်။
“ဖုန်းရွှေ” ဟာလည်း တရုတ်လူမျိုးများရဲ့ အားထားယုံကြည်ရာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဂမ္ဘီရပညာ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သန်းပေါင်းများစွာသော တရုတ် လူမျိုးများဟာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအဖြစ် လိုက်နာလျှက် ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးများမှာလည်း “ဖုန်းရွှေ” ပညာနဲ့ အလားတူတဲ့ “မြန်မာ့ရိုးရာ အဆောက်အဦပညာ” ဆိုတာ ရှိခဲ့ပြီး ရှေးခေတ် အိမ်ဆောက် လက်သမားဆရာ တိုင်းလိုလို တတ်မြောက်ကြတဲ့ ပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆောက်လုပ်နေကြတဲ့ အဆောက်အဦ အတော်များများမှာတော့ ဒီပညာရပ်တွေရဲ့ အရိပ်အငွေ့ တစ်ခုတစ်လေမှ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ တတ်မြောက်တဲ့ လက်သမား၊ ပန်းရံဆရာရယ်လို့လည်း သိပ်မရှိကြတော့ပါဘူး။
“ဖုန်းရွှေ” ပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တွေ့ “ခံလိုက်ရတာ”လေးတစ်ခု ရှိလို့ ဖောက်သည်ချ ချင်ပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၇) နှစ်လောက်က ကျွန်တော် လမ်းမတော် (၁၉)လမ်း မှာ အခန်းငှားနေရာကနေ – အိမ်လခတွေ အရမ်းတက်လာလို့ ဘုရင့်နောင် (သီရိမွန်) အိမ်ယာ ကို ပြောင်းလိုက် ရပါတယ်။ အဲဒီ အိမ်ယာက အခန်းမှာ ဘုရားခန်း တစ်ခန်း ၊ ဧည့်ခန်း တစ်ခန်း ၊ အိပ်ခန်း (၂)ခန်း ပါ,ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် မိသားစုက “ကြီး” တော့ ဘုရားခန်း တစ်ခန်း သပ်သပ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘုရားစင်ကို ဧည့်ခန်းထဲ ရွှေ့လိုက်ရပြီး ဘုရားခန်းကို လူနေလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရားစင် နဲ့ နောက်ဖေး အိမ်သာပေါက်က တစ်တန်းတည်း ကျနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ရွှေ့လို့ရပါဘူး။ “ဖုန်းရွှေ” ပညာအရ လုံးဝ မအပ်စပ်တဲ့ အရာပါ။
စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့်ဖြစ်လို့ ဒီကြားထဲကို သုံးထပ်သားနဲ့ (Partition) တစ်ခု “ကာ”ထား လိုက်ပါတယ်။ “စတိ ယတြာ” လုပ်ကြည့်တာပေါ့လေ။ မရပါဘူး ။ အိမ်ပြောင်းပြီး တစ်နှစ် မပြည့်ခင်အတွင်း ကျွန်တော် ကျန်းမာရေး အသည်းအသန်ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံ တက်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ (၂)နှစ်ကျော် နေခဲ့တဲ့ ကာလမှာ ဆေးရုံ (၂)ကြိမ်တက်ရပါတယ်။ လူလည်း ကျန်းမာရေး ဂျုံးဂျုံးကျ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောက်ထပ်အခန်းကလည်း နေရာချထားပုံက ကျွန်တော်တို့အခန်းအတိုင်း ပါဘဲ။ ဘုရားစင် နဲ့ အိမ်သာနဲ့ တစ်တန်း တည်း။ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလာစ က အဲဒီ အခန်းငှားနေသူ “ကျောက်ကပ်ရောဂါ” ခံစား နေရပါတယ်။ (ဒီ အခန်းရောက်မှ ရောဂါ စ,ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်)။ နောက် ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီး (၁)နှစ်လောက်ရှိတော့ အဲဒီလူ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားရှာ ပါတယ်။
“ဖုန်းရွှေ”က ဒီတင် မပြီးသေးပါဘူး။ မနှစ်က နွေရာသီ မတိုင်မှီလေးမှာ “စမ်းချောင်း” က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် “ကျွန်တော် အခုနေတဲ့ “အလုံ” ရပ်ကွက်ထဲ ကို ပြောင်းလာတယ် ကြားလို့ ကျွန်တော် သွားတွေ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အခန်းမျာ နေရာချထားပုံက – ဘုရင့်နောင်မှာ ကျွန်တော် နေတုန်းက အိမ်ခန်း ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း “ဘုရားစင်” နဲ့ “အိမ်သာ” က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီဘုရားစင်ကို နေရာ ချက်ခြင်း ရွှေ့လိုက်ဖို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ ယုံကြည်ဟန် မတူပါဘူး။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ အဲဒီ နွေရာသီမှာဘဲ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ “ကိုယ်တစ်ခြမ်း“ လေဖြတ်သွားလို့ အခု ဒီစာ ရေးနေချိန်မှာ အိပ်ယာထဲ လဲနေပါတယ်။
ကဲ – တကယ်ဘဲ “ဖုန်းရွှေ” ပညာရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုလား ? တိုက်ဆိုင်မှုလား ဆိုတာ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ “ဖုန်းရွှေ” နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်မပြောပြ နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် “ဖုန်းရွှေ” ပညာကို လေ့လာချင်သူများအတွက် “ဖုန်းရွှေ” သီးသန့် မြန်မာဘလော့လေးတစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာပါပြီဗျာ။ “ကိုအုပ်စိုး” ရဲ့ MM FENG SHUI STUDY ပါတဲ့ဗျား။ အဲဒီမှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်ကလေးကို မိတ်ဆက် ပေးချင်လို့ ယခု “ဖုန်းရွှေလာပြီ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ရေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။ ဒီနေရာကို နှိပ်လိုက်ပြီး လင့်ခ်သွားလိုက်ပါ ခင်ဗျား။
(ကိုအုပ်စိုး ရေ ၊ ကျွန်တော်ကတော့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီနော် ၊ ပို့စ်တွေ မှန်မှန်တော့ တင်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စိတ်အား ထက်သန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ် . . . )
ဖုန်းရွှေအကြောင်း ဤတွင် အဆုံးသတ်ပါပြီ။
အလည်လာ ဖတ်ရှုသူအပေါင်း ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged Feng shui, MaHaBote, Myanmar Astrology, ဂမ္ဘီရ, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ဖုန်းရွှေ, ဘုတ်ကြီး(၈)ပါး ဗေဒင်, ယိချင်း, အိုးအိမ်ဆောက်လုပ်မှု ပညာ	16 comments on “# ဖုန်းရွှေ လာပြီ”	Dream on September 27, 2010 at 7:39 pm said:
ကျေးဇူးပါ……ခုလို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက် … အဲဒီဆိုဒ်ကို သွားလေ့လာလိုက်ဦးမယ်……း)
YoungGun on September 27, 2010 at 8:17 pm said:
စာတွေ့တင် မကဘဲ၊ လက်တွေ့တွေ ၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံက သုံးသပ်ချက်တွေ အပြည့်အဝနဲ့ ဖတ်ရှုခွင့်ရတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..
အုပ်စိုး on September 27, 2010 at 8:37 pm said:
အခုလို ပို့စ်အသစ်တစ်ခု ရေးပြီး တကူးတက ကြော်ငြာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။ ပို့စ်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ လက်တွေ့ အသုံးချသွားနိုင်တဲ့အထိ ရေးသားပေးသွားပါ့မယ်။
Dr.Tin Bo Bo on September 27, 2010 at 8:45 pm said:
ဒီလို လက်တွေ့အသုံးချ ဆိုဒ်မျိုးက အမှန်တကယ်လည်း ရှိသင့်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ လောကအကျိုးပြု ပညာပေး ဆိုဒ်များ ပေါ်ထွန်းလာမှုကို အမြဲမျှော်လင့်နေသူဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘက်က ကူညီနိုင်တာ ရှိရင်လည်း အစွမ်းကုန် ကူညီသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က လုပ်ပေးချင်ပေမယ့် လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာကို အမြဲကျေးဇူးတင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုအုပ်စိုးရဲ့ ဆိုဒ်ဟာ တကယ်အကျိုးပြုမယ့် ဆိုဒ်တစ်ခုလို့ မျှော်လင့် ယုံကြည်လျှက်ပါ။
ကညာ on September 27, 2010 at 11:24 pm said:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ…အဲ့ဖုန်းရွှေပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်..ဖတ်စရာ ဆိုဒ်တစ်ခုကို ထပ်သိ၇တဲ့ တွက်ကျေးဇူး…….
မိုးညိုညို on September 28, 2010 at 9:42 am said:
ကျေးဇူးပါရှင် . . ဆရာ့ဆိုဒ်ကို အမြဲလေ့လာနေတာ . . အရင်ကထက် အရေးအသားပိုင်းရော အကြောင်းအရာပိုင်းတွေပါ ပိုစုံလင်လာပြီး အများကြီး တိုးလာလို့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ် . . အားလုံးပို့တဲ့ မေတ္တာရယ် ကျေးဇူးတင်ခြင်းတွေရယ်နဲ့ ဆရာငြိမ်းချမ်း အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်ရှင်
မိုးညိုညို on September 28, 2010 at 9:46 am said:
အဲ . . ရေးလက်စနဲ့ နောက်တစ်ခု ပြောပါရစေဦး . . ကိုဖုန်းရွှေ . . အဲလေ . . ကိုအုပ်စိုးကိုတောင်းဆိုချင်တာလေးပါ . . မိုးညိုတို့ အားလုံး ဖတ်လို့ရအောင် blogspot နဲ့မထားပဲ တခြားဒိုမိန်းလေးနဲ့ထားပေးပါလို့ပါ . . ခုဆို မိုးညိုဖတ်မရတော့ဘူး . .း( . . ကျော်လို့ရတဲ့ ဆိုင်ရောက်မှပဲ ဖတ်နိုင်ပါတော့မယ် . .
colin on September 28, 2010 at 2:52 pm said:
thank you Sayar,
အုပ်စိုး on September 28, 2010 at 5:06 pm said:
Dot Net ဖြစ်ဖြစ် Dot Com လေး ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ ဆရာမ မိုးသူနဲ့လည်း တိုင်ပင်ရဦးမှာ ဖြစ်လို့ပါ။ ခုလောလောဆယ် သည်းခံပြီး ကျော်ခွကြည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
cho on September 30, 2010 at 2:01 am said:
Very good post,I also interest FENG SHUI.
Ma Sandar Soe on October 6, 2010 at 2:32 pm said:
အဲဒီ ဖုန်းရွှေပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ကျွန်မတို့အိမ် က ပစ်ချက်လေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်လား ကြည့်ချင်နေတယ် ဖွင့် မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါ
Dr.Tin Bo Bo on October 6, 2010 at 6:08 pm said:
Ma Sandar Soe ရေ
ဖုန်းရွှေဆိုဒ်ကို နိုင်ငံအစုံက အလွယ်တကူ ဖတ်လို့ရအောင် ပိုင်ရှင် “ကိုအုပ်စိုး” တစ်ယောက် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မကြာခင် စိတ်တိုင်းကျ ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။ နည်းနည်း သည်းခံပြီး စောင့်ပေးပါဗျာ။
yar yar on October 12, 2010 at 9:23 pm said:
http://mmfengshuistudy.blogspot.com/ ကဝင်လို့မရလို့ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်က ပြည်ပမှာပါ။ Blogspot တွေလဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပေးထားတဲ့ လင့်ကဝင်လို့မရလို့ပါ။ သိတဲ့လူရှိရင် ကူညီပေးကြပါခင်ဗျာ။
minthu on January 14, 2011 at 3:15 am said:
thank u sayar
Manhlay on July 20, 2011 at 6:25 pm said:
ဒီလိုအသိပညာတွေရစေတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာဝင်ရောက ဖက်ရှုရတဲ့ အတွက် ဗဟုသုတတွေ အများကြီး တိုးစေပါတယ်ခင်ဗျား။
winnaingsoe on July 29, 2011 at 5:17 pm said:
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,784)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,432)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,204)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,047)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,073)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,386)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,209)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,714)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,754)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,408)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,356)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,219)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,164)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,134)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,456)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,415)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,091)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,908)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,763)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,756)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,292)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,897)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,789)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,744)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,614)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,568)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,354)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,185)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,163)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,064)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !